Tallaabada ugu horreysa waa in la soo gudbiyo warqad laba bog ah oo ujeedo ah oo ku saabsan sida layidhka McKnight uu u oggolaanayo habab cusub iyo guulaha horumarinta cilmi baarista.
Warqadda waa in ay wax ka qabato su'aalaha soo socda:
Maxay tahay dhibaatada caafimaad ee aad la tacaaleyso?
Waa maxay ujeedooyinkaaga gaarka ah?
Sidee aqoonta iyo waayo-aragnimada aad ka heshay cilmi-baaris asaasi ah ayaa loo isticmaalayaa si loo wanaajiyo fahamka cudurka maskaxda ama cudurka?
Warqaddu waa inay si cad u qeexdaa sida cilmi-baarista la soo jeediyay ay u ogaan doonto hababka dhaawaca maskaxda ama cudurada iyo sida ay u tarjumeyso calaamadaha, kahortaga, daaweynta, ama daaweynta.
Warqada ujeedadu waa inay ku jirtaa cinwaannada emailka ee baarayaasha maamulaha iyo magac ujeedka mashruuca.
Nidaamka codsigu waa gebi ahaanba internetka. Fadlan daabac / URL ka dheji https://www.GrantRequest.com/SID_5768?SA=SNA&FID=35006 si aad u hesho foomka Heerka Labaad LOI. Mid ka mid ah baaraha (xiriirka koowaad ee soo jeedinta) ayaa looga baahan doonaa inuu sameeyo magac iyo lambar sir ah (fadlan sii hayso magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah sida aad ugu baahan doonto inta lagu jiro nidaamka), buuxi waraaqda wejiga ah ee internetka, iyo laba bog sharaxaadda mashruuc aan ka badnayn laba bog oo tixraac ah; sawiradu waa in ay ku dhex jiraan labada bog. Fadlan keliya hal-boos oo ku qoran font 12-dhibcood adigoo isticmaalaya khidad hal-inch ah. Qeexitaanka mashruuca, tixraacyada, iyo NIH Biosketches ee loogu talagalay PI kasta waa in lagu dhajiyo hal PDF ah.
Dhameystayaasha waxaa lagu martiqaadi doonaa email ahaan si ay u soo gudbiyaan soo jeedin buuxa, iyo Heerka Labaad URL ayaa la bixin doonaa. Tartanka waa mid aad u kacsan; Codsadayaashu way soo dhaweynayaan inay codsadaan in ka badan hal mar.
Haddii aadan helin xaqiijin email oo ah helitaanka LOI toddobaad gudaheed, fadlan la xiriir Nan Jahnke 612-333-4220 ama njahnke@mcknight.org
Guddi dib-u-eegis ayaa qiimeynaya waraaqaha waxayna ku casuumi doonaan dhowr musharrixi ah inay soo gudbiyaan soo jeedin buuxda.
Ka dib marka dib loo eego soo jeedinta, guddi wuxuu kugula talin doonaa ilaa afar abaalmarin Guddiga Agaasimaha Santuukha Maaliyadda. Guddiga ayaa go'aan ka gaari doona.
Sanduuqa Maaliyad-bixinta ayaa maal-galin doona afar abaal-marin, mid walbana wuxuu siinayaa $ 100,000 sanadkiiba muddo saddex sano ah. Abaalmarinta waxaa lagu dhawaaqi doonaa Diseembar wuxuuna bilaabi doonaa Febraayo 1 of sanadka soo socda.
Musharrixiinta Xasiloonida iyo Caqli-yada Caqabadaha:
Waa in uu wax ka qabtaa aagaha caafimaad ee ku haboon ee neuroscience siyaabo cusub.
Ma ahan shaqaale ka shaqeeya sida kuwa Allen Institute, Machadka Qaranka ee Caafimaadka, Howard Hughes Medical Institute iyo hay'ado isku mid ah.
Ma haawin abaal-marin McKnight oo kale oo lagu soo rogi doono abaal-marinta Heerka iyo Cognitive Disorder.
Waxaan daneyneynaa juqraafi, jinsi, iyo kala duwanaansho jinsiyadeed waxaanna ku dhiirigelinaynaa haweenka iyo dadka laga tirade badan yahay, iyo sidoo kale saynisyahannada ka soo jeeda Maraykanka, si ay u codsadaan.
Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa hawlo kala duwan oo cilmi baaris ah laakiin ma aha mushaarka qofka qaata. Meelaha kale ee maaliyadeed ee musharaxa ayaa la tixgelin doonaa marka la dooranayo abaalmarinta.
Maalinta ugu Dambeeya: Maarso 25, 2019
Go'aanka Guddiga Doorashada: Mid-June
Talooyin Dheeraad ah: Sebtembar 3, 2019
Go'aanka Guddiga iyo Wargalinta: Diseembar
Maalgalinta Bilowga: Febraayo 1, 2020